Galantamine Hydrobromide: zava-mahadomelina tsara ho an'ny aretin'i Alzheimer - Phcoker
Galantamine Hydrobromide topimaso
Hydrobromide galantamine dia fanafody famoahana fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana dementia amin'ny aretin'i Alzheimer. Tamin'ny voalohany, Galantamine dia nalaina avy tamin'ny zavamaniry Galantus spp. Ny fanampiana galantamine kosa dia alkaloid tertiary izay mifangaro simika.
Na dia tsy takatra tsara aza ny antony mahatonga ny aretin'i Alzheimer dia fantatra fa ny olona mijaly amin'ny Alzheimer dia manana ambaratonga ambany amin'ny acetylcholine simika ao amin'ny ati-dohany. Ny acetylcholine dia mifandray amin'ny fiasa kognitika ao anatin'izany ny fahatsiarovana, ny fianarana ary ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny fihenan'ity simika (acetylcholine) ity dia mifandray amin'ny dementia an'ny Aretin'i Alzheimer.
Galantamine dia mahazo tombony amin'ireo marary amin'ny aretin'i Alzheimer noho ny fomba fiasa roa. Izy io dia miasa amin'ny fampitomboana ny haavon'ny acetylcholine amin'ny fomba roa. Ny iray dia amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fahasimban'ny acetylcholine ary ny iray hafa dia amin'ny alàlan'ny fanodinana allosteric ny receptor acetylcholine nikotinika. Ity dingana roa ity dia manampy amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny anzima, acetylcholine.
Na dia mety hanamaivana ny soritr'aretin'ny aretina Alzheimer aza izany, ny galantamine hydrobromide dia tsy fanasitranana tanteraka ny aretin'i Alzheimer satria tsy misy fiantraikany amin'ny antony mahatonga ilay aretina.
Ankoatry ny tombotsoan'ny galantamine amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny aretin'i Alzheimer, ny galantamine dia mifandray amin'ny nofinofy tsara. Ny galantamine sy ny manonofy tsara dia fikambanana izay notaterin'ny mpampiasa tsirairay. Mba hahatratrarana an'ity galantamine ity dia alaina eo anelanelan'ny torimasonao ohatra aorian'ny torimaso 30 minitra. Ny mpitsabo sasany dia hampirisika ny galantamine sy ny tombony azo amin'ny nofinofy amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana fanaraha-maso mba hisorohana ireo voka-dratsy tsy ilaina.
Ny famenoana Galantamine dia miseho amin'ny endrika takelaka, vahaolana am-bava ary kapsula lava-famoahana. Matetika izy io dia entina amin'ny sakafo sy misotro rano be dia be mba hialana amin'ny voka-dratsy tsy ilaina.
Ny voka-dratsy ateraky ny galantamine dia misy fisaleboleboana, fandoavana, aretin'andoha, tsy fahatokisan-tenda na fanaintainana, fahalemen'ny hozatra, fanina, fahamamoana ary fivalanana. Ireo valan'aretina hydrantomida galantamine ireo dia mazàna ary mitranga rehefa manomboka mihinana an'ity fanafody ity ianao. Mety hanjavona miaraka amin'ny fotoana izy ireo, na izany aza raha tsy mandeha izy ireo dia manatona ny dokoteranao. Misy ihany koa ny voka-dratsin'ny tsy fahita matetika nefa lehibe izay mety hitranga toy ny fahasahiranana miaina, fanaintainan'ny tratra, fanaintainan'ny vavony mafy, fikorontanana, fikatsoana, torana hafa.
（1） Inona ny Hydrobromide Galantamine?
Galantamine hydrobromide dia fanafody fitsaboana ampiasaina hitsaboana malefaka na antonony dementia mifandray amin'ny aretin'i Alzheimer. Ny aretin'i Alzheimer dia aretin-tsaina izay matetika manimba ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaizany misaina, ny fianarana, ny fifandraisana ary ny fahaizana manatanteraka asa isan'andro.
Ny fanafody galantamine hydrobromide dia mety tsy mitsabo ny aretin'ny Alzheimer fa azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody Alzheimer hafa.
Izy io dia miseho amin'ny endrika lehibe telo misy tanjaka samihafa. Ny endrika galantamine dia vahaolana am-bava, takelaka ary kapsula lava-famoahana.
（2） Fa maninona no ampiasaina? iza no tokony hihinana an'ity fanafody ity?
Galantamine hydrobromide dia ampiasaina hitsaboana soritr'aretina malemy na antonony amin'ny aretin'i Alzheimer. Galantamine hydrobromide dia tsy voalaza hanasitranana ny aretin'i Alzheimer satria tsy misy fiantraikany amin'ny fizotry ny aretina.
Galantamine hydrobromide dia voalaza ho ampiasain'ny olona manana soritr'aretina malemy na antonony amin'ny aretin'i Alzheimer.
（3） Ahoana ny fomba fiasany?
Galantamine dia ao amin'ny kilasy fanafody antsoina hoe «acetylcholinesterase inhibitors».
Galantamine dia miasa amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny anzima, acetylcholine amin'ny fomba roa. Voalohany dia miasa toy ny inhibitor acetylcholinesterase azo ahodina sy mifaninana izy io ka manakana ny fahatapahan'ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha. Faharoa, manentana ireo mpandray fanafody nikotinika ao amin'ny ati-doha koa izy io hamoahana acetylcholine bebe kokoa.
Io dia mampiakatra ny habetsaky ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha, izay mety hanampy amin'ny fihenan'ny soritr'aretina mifandraika amin'ny fahaverezan-tsaina.
Galantamine dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahaizana misaina sy mamorona endrika fahatsiarovana ary koa mampihena ny fahaverezan'ny fiasan'ny kognita amin'ny mararin'ny aretina Alzheimer.
Tombontsoa Hydrobromide Galantamine amin'ny Alzheimer's aretina
Ny aretin'i Alzheimer dia mahatonga ny selan'ny ati-doha hiharatsy ary ho faty amin'ny farany. Ny tena antony tsy fantatra loatra fa io aretina miandalana io dia mitarika fihenan'ny fiasan-tsaina toy ny fahatsiarovana, fianarana, fisainana ary fahaizana manao asa isan'andro. Ny fantatra momba ny mararin'ny Alzheimer dia ny ambaratonga ambany amin'ny acetylcholine simika.
Ny Galantamine dia mampiasa amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny dementia mifandraika amin'ny aretin'i Alzheimer dia mitranga noho ny fomba fiasa roa. mampitombo ny haavon'ny acetylcholine, anzima manan-danja amin'ny fanatsarana ny kognita. Galantamine dia miasa ho toy ny inhibitor acetylcholinesterase azo ahodina sy mifaninana ka manakana ny fahatapahan'ny acetylcholine. Manentana ireo receptor nikôtinika hamoaka acetylcholine bebe kokoa koa izy io.
Tombontsoa hafa azo raisina
(1) Anaram-bosotra Antioxidant
Ny fihenjanana azo avy amin'ny oksidia dia fantatra fa antony mahatonga ny aretim-po mihena maro toy ny aretin'i Parkinson, aretin'i Alzheimer, diabeta, sns. Mitranga ara-dalàna izany rehefa mihantitra ny taona fa rehefa misy tsy fitoviana eo amin'ny radika maimaim-poana sy ny antioksida dia mety hisy ny fahasimban'ny sela.
Galantamine dia fantatra amin'ny fikolokoloana karazana oksizenina mihetsika ary manome fiarovana ny neurons amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fahasimban'ny neurônan'ny fihenjanana oksidatif. Ny Galantamine koa dia afaka mampihena ny famokarana be loatra ny karazana oksizenina mihetsika amin'ny fampitomboana ny haavon'ny acetylcholine.
Galantamine dia mampiseho fihetsiketsan'ny bakteria.
Ahoana ny fihinanana an'io fanafody io?
i. Alohan'ny handraisana ny galantamine hydrobromide
Toy ny amin'ny fanafody hafa, dia malina ny fitandremana alohan'ny handraisana galantamine hydrobromide.
Ampahafantaro ny dokotera raha tsy mahazaka galantamine ianao na ny iray amin'ireo akora tsy miasa.
Ampahafantaro ny fanafody rehetra raisinao amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny fanafody voatendry, ny fanafody tsy lafo, ny fanafody raokandro na ny vokatra ara-pahasalamana voajanahary.
Soso-kevitra ny hampahafantatra amin'ny dokotera ny toe-javatra hafa izay iharetanao;
Marary kibo maharary,
Fandidiana vao haingana indrindra momba ny vavony na ny tatavia.
Tokony hampandrenesina ny mpitsabo anao raha bevohoka ianao na mikasa ny bevohoka ary raha mampinono. Raha bevohoka ianao rehefa mandray fanampim-panazavana galantamine dia tokony hiresaka haingana amin'ny dokoteranao.
Zava-dehibe ny ilazanao amin'ny dokotera fa mandray galantamine ianao alohan'ny fandidiana rehetra ao anatin'izany ny fandidiana nify.
Vokatry ny hydrochromide galantamine ampidiro ao an-tory. Tokony hiala amin'ny milina sy ny milina ianao amin'izay.
Ny fihinanana galantamine sy alikaola dia mety hampitombo ny vokatry ny fahamendrehana amin'ny galantamine hydrobromide
II. Doso soso-kevitra
(1) Dementia ateraky ny Alzheimer's aretina
Galantamine hydrobromide amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer dia miseho amin'ny endrika mahazatra ary koa ny marika galantamine toy ny Razadyne fantatra amin'ny anarana hoe Reminyl.
Galantamine hydrobromide dia miseho amin'ny endrika telo samy hafa tanjaka. Ny takelaka am-bava dia misy amin'ny takelaka 4 mg, 8 mg ary 12 mg. Ny vahaolana am-bava dia amidy amin'ny fatran'ny 4mg / ml ary amin'ny ankamaroan'ny tranga amin'ny tavoahangy 100 ml. Ny kapsily famelana am-bava maharitra dia misy ao 8 mg, Tablette 16 mg ary 24 mg.
Raha ny takelaka am-bava sy ny vahaolana am-bava dia raisina in-droa isan'andro, ny kapsily am-bava lava vava dia alaina indray mandeha isan'andro.
Ny fanombohana fatra galantamine ho an'ny endrika mahazatra (takelaka am-bava sy vahaolana am-bava) dia 4 mg indroa isan'andro. Ny fatra dia tokony horaisina amin'ny sakafo maraina sy hariva.
Ho an'ny kapsily avoakan'ny famoahana dia 8 mg isan'andro no fatra atolotra amin'ny sakafo maraina. Ny kapsily famoahana maharitra dia tokony ho raisina manontolo mba ahafahan'ny famoahana miadana ny fanafody mandritra ny andro. Aza manorotoro na manapaka ny capsule, noho izany.
Ho an'ny fikojakojana fikojakojana arakaraka ny fandeferanao amin'ny galantamine amin'ny endrika mahazatra dia tokony horaisina amin'ny 4 mg na 6 mg indroa isan'andro ary fitomboan'ny 4 mg isaky ny 12 ora farafahakeliny elanelam-potoana 4 herinandro.
Ny kapsily famoahana maharitra dia tokony tazomina amin'ny 16-24 mg isan'andro ary fitomboan'ny 8 mg amin'ny elanelam-potoana 4 herinandro.
Fiheverana lehibe iray rehefa mandray galantamine
Raiso foana ny galantamine miaraka amin'ny sakafonao sy rano be. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny voka-dratsin'ny galantamine tsy ilaina.
Manoro hevitra anao ny mihinana fatra galantamine voalaza mandritra ny ora mitovy isan'andro. Raha malahelo fatra ianao dia raiso raha vao tadidinao raha tsy akaiky ny doka manaraka. Raha tsy izany dia esory ny doka ary tohizo ny fandaharam-potoanao mahazatra. Na izany aza, raha malahelo ny fatrao ianao mandritra ny 3 andro misesy dia miantso ny mpitsabo anao izay mety manoro hevitra anao hanombohana ny fatrao.
Miankina amin'ny tanjona kendrena, ny dokoteranao dia mety manitsy ny fatrao arak'izany amin'ny fampitomboana azy farafahakeliny elanelam-potoana 4 herinandro. Aza amboary ho anao ny fatrany galantamine.
Raha omena anao ny kapsily aelim-panafahana dia aza hadino ny mitelina azy manontolo nefa tsy mitsako na manorotoro azy. Izany dia satria novaina ilay takelaka mba hamoahana tsimoramora ny fanafody mandritra ny andro.
Ho an'ny fanafody famandrihana am-bava dia araho hatrany ny torohevitra omena ary ampio ny zava-mahadomelina amin'ny zava-pisotro tsy misy alikaola izay tokony ho raisina eo noho eo.
(2) Dosage ho an'ny olon-dehibe (18 taona no ho miakatra)
Ny kapsily avoakan'ny famotsorana dia misy fatra 8 mg nalaina indray mandeha isan'andro maraina. Ny mpitsabo anao dia mety manitsy ny fatrao amin'ny fampitomboana azy amin'ny 8 mg isan'andro aorian'ny farafahakeliny 4 herinandro. Ho an'ny fikojakojana dia tokony mihinana 16-24 mg isan'andro araka ny torohevitry ny dokoteranao.
Ho an'ny doka famoahana haingana, ny doka fanombohana dia 4 mg nalaina indroa isan'andro miaraka amin'ny sakafo noho izany 8 mg isan'andro. Ny dosie dia mety hampitomboin'ny dokotera anao amin'ny 4 mg isan'andro aorian'ny farafahakeliny elanelam-potoana 4 herinandro.
(3) Dosage ho an'ny ankizy (taona 0-17 taona)
Ny vokatra azo avy amin'ny gazy Hydrobromide dia tsy mianatra amin'ny ankizy (taona 0-17 taona), noho izany dia tokony hampiasaina amin'ny dokotera mpitsabo.
III. Inona no hatao raha be loatra ny fatra?
Raha mandray be loatra amin'ny doka galantamine ianao na ireo marary izay arahi-maso dia tokony hiantso ny dokotera na ny foibe fanaraha-maso ny poizina avy hatrany. Azonao atao koa ny mandeha any amin'ny tobin'ny vonjy taitra akaiky indrindra.
Ny soritr'aretina iraisana mifandraika amin'ny fatran'ny galantamine dia ny fisaleboleboana, ny hatsembohana, ny kibo marary mafy amin'ny fifohana rivotra, ny hozatra mikitroka na ny fahalemena, ny fikorontanana, ny torana, ny fitempon'ny fon'ny tsy ara-dalàna ary ny fahasarotana rehefa mimi.
Ny dokotera dia mety hanome anao fanafody sasany toy ny atropine hanodina ny voka-dratsin'ny galantamine mifandraika amin'ny fihoaram-pefy.
Inona avy ireo vokatra hafa mifandraika amin'ny fampiasana Galantamine hydrobromide?
Na dia manome tombony ara-pahasalamana ho an'ny olona mijaly amin'ny aretin'i Alzheimer aza ny hydrochromide galantamine, dia mety misy vokany galantamine tsy ilaina. Misy vokany galantamine izany dia mety mety hiaina azy ireo fa tsy ny olon-drehetra.
Ny vokatra mahazatra indrindra mety hitranga amin'ny fampiasana galantamine dia;
Ireo fambara ireo dia mahazatra rehefa manomboka mihinana galantamine ianao nefa matetika malefaka ary mety hanjavona amin'ny alàlan'ny fampiasana fanafody. Na izany aza, raha miziriziry na lasa mafy izy ireo dia aza hadino ny miantso ny dokotera anao raha mila torohevitra matihanina ianao.
Ny olona sasany dia mety mahatsapa voka-dratsy. Tsy dia fahita ireo vokatra ratsy ireo ary tokony hiantso ny dokotera ianao raha vao hitanao.
Ny voka-dratsy lehibe dia misy:
Fihetseham-po mahery vaika toy ny aretin-koditra, mangidihidy ary indraindray mamontsina ny tarehy, ny tenda na ny lela.
soritr'aretin'ny sakana atrioventricular anisan'izany ny fitepon'ny fo miadana, havizanana, fanina ary torana
vavony sy mandeha rà
Ny vavony izay mihosin-dra na miseho toy ny tany fisotroana kafe
Fandrosoana ny olan'ny havokavoka amin'ny olona voan'ny sohika na aretin'ny havokavoka hafa
sahirana amin'ny fivalanana
marary kibo / kibo mafy
ra ao anaty urine
fahatsapana may na fanaintainana mandritra ny fivalanana
ny voka-dratsin'ny galantamine marketing sasany izay voalaza fa misy;
fanintona / fikorontanana na mety
tinnitus (maneno amin'ny sofina)
sakana atrioventricular na sakana amin'ny fo tanteraka
fiakarana anzima aty
mena na volomparasy (erythema multiforme).
Ity dia lisitra maro izay tsy misy ny vokany galantamine rehetra. Tsara araka izany ny miantso ny mpitsabo anao raha sendra misy vokany tsy mahazatra eo am-panaovana ity fanafody ity.
Inona no karazana zava-mahadomelina mifandraika amin'ny hydrochromide galantamine?
Ny fifampiraharahana amin'ny zava-mahadomelina dia manondro ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina sasany ny hafa. Ireo fifandraisana ireo dia misy fiatraikany amin'ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina sasany ary mety hahatonga ny tsy dia mahomby na koa hanafainganana ny voka-dratsy.
Misy fantatra fifanakalozan-drivotra hydrochomide galantamine miaraka amin'ny fanafody hafa. Mety efa fantatry ny dokoteranao ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina sasany. Ny mpitsabo anao dia afaka manova ny sasany amin'ny fatra anao mba hampihena ny fahafahan'ny fifandraisana zava-mahadomelina na koa hanova tanteraka ny fanafody. Mety mahasoa anao ny manome fanafody ary indrindra ny fanafody avy amin'ny loharano iray ihany toy ny fivarotam-panafody ho an'ny fangaro mety.
Tazomy ihany koa ny lisitry ny fanafody raisinao ary ampahafantaro amin'ny mpitsabo anao izany vaovao izany alohan'ny fisoratana anarana.
Ny sasany amin'ireo fifandraisana galantamine hydrobromide dia;
Fifandraisana amin'ny anti-depressants
Ireo fanafody ireo dia ampiasaina hitsaboana ny fahaketrahana ary mety hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny galantamine izay mahatonga azy io tsy hahomby. Ireo fanafody ireo dia misy ny amitriptyline, desipramine, nortriptyline ary doxepin.
Fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina ampiasaina hitsaboana ny allergy
Ireo fanafody allergy ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny galantamine.
Ireo fanafody ireo dia misy ny chlorpheniramine, hydroxyzine ary diphenhydramine.
Fifandraisana amin'ny fanafody mihetsika
Ireo fanafody ireo dia mitaona ny asan'ny galantamine hydrobromide.
Ireo fanafody ireo dia misy dimenhydrinate sy meclizine.
Ny zava-mahadomelina amin'ny Alzheimer
Ireo fanafody dia miasa mitovy amin'ny galantamine hydrobromide. Rehefa ampiasaina miaraka ireo zava-mahadomelina ireo dia mety hampitombo ny risikao hiaina ny vokatra hafa ateraky ny galantamine. Ireo fanafody ireo dia misy ny donepezil sy rivastigmine.
Na izany aza, ny vokatra synergetika sasany dia mety ho tratra miaraka amin'ny fitambarana sasany.
Galantamine sy memantine dia ampiasaina hitsaboana ny aretin'i Alzheimer. Raha Galantamine dia acetylcholinesterase inhibitor memantine dia mpanohitra mpanohitra NMDA.
Rehefa miara-mandray galantamine sy memantine ianao dia manana fanatsarana kognita tsara kokoa noho ny rehefa mampiasa galantamine irery.
Na izany aza, ny fanadihadiana sasany teo aloha dia tsy nahitana fanatsarana lehibe teo amin'ny asa kognita rehefa niara-nampiasaina ny galantamine sy ny memantine.
Fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina ho an'ny tatavia be loatra
Ireo fanafody ireo dia misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny galantamine. Raha niara-niasa ianao dia mety tsy hijinja galantamine. Ireo fanafody ireo dia misy darifenacin, tolterodine, oxybutynin ary trospium.
Ireo fanafody ireo dia misy dicyclomine, loperamide ary hyoscyamine. Mety hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny galantamine.
Fanafody galantamine sy autisme
Rehefa ampiasaina miaraka ny fanafody galantamine sy autisme toy ny risperidone. Notaterina fa hanatsara ny sasany amin'ireo soritr'aretin'ny autisme toy ny fahasosorana, ny fahalainana ary ny fisintahan'ny fiaraha-monina
Aiza no ahazoantsika ity vokatra ity?
Galantamine hydrobromide dia azo alaina avy amin'ny farmasinao eo an-toerana na amin'ny fivarotana an-tserasera. Mpanjifa an'ny galantamine mividy izany avy amin'ny apotekerista nahazo fankatoavana afaka manome fanafody. Raha heverinao fa galantamine mividy azy amin'ny fikambanana malaza ary mampiasa azy io araka ny voatondro nataon'ny mpitsabo anao.
Galantamine dia zava-mahadomelina tsara amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny dementia mifandray Alzheimer aretina. Saingy tsy fanasitranana ny aretina izy io satria tsy manafoana ny fizotran'ny aretina Alzheimer io.
Tokony hampiasaina ho singa iray amin'ny fitsaboana aretina Alzheimer miaraka amin'ny paikady hafa. Izy io dia famenon-tsakafo tsara indrindra noho ny mekanika roa amin'ny fampitomboana ny acetylcholine ao amin'ny ati-doha. Manolotra tombony fanampiny amin'ny fiarovana ny neural amin'ny alàlan'ny fisorohana ny adin-tsaina oxidative.
Wilcock GK. Lilienfeld S. Gaens E. Ny fahombiazany sy ny fiarovana ny galantamine amin'ireo marary manana aretina Alzheimer malefaka ka antonony. 2000, 321: 1445-1449.
Lilienfeld, S., & Parys, W. (2000). Galantamine: tombony fanampiny ho an'ireo marary voan'ny Alzheimer. Ny aretin-tsaina sy ny aretin-tsaina ara-tsaina, 11 Fitaovana 1, 19–27. https://doi.org/10.1159/000051228.
Tsvetkova, D., Obreshkova, D., Zheleva-Dimitrova, D., & Saso, L. (2013). Fihetsiketsehana antioksidan'ny galantamine sy ny sasany amin'ireo derivatives avy aminy. Simia fanafody, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, C., & Schneider, L. (2006). Galantamine ho an'ny aretin'i Alzheimer ary fahasembanana ara-pahalalana malemy. Ny tahiry Cochrane momba ny fanaraha-maso voarindra, (1), CD001747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3.
1. topimaso momba ny Hydrobromide Galantamine
2. Hydrobromide Galantamine
3.Galantamine Hydrobromide tombony amin'ny aretin'i Alzheimer
4. tombontsoa hafa mety
5.Ahoana ny fihinanana an'io fanafody io?
6.Inona ireo vokany hafa mifandray amin'ny fampiasana Galantamine hydrobromide?
7.Inona karazana zava-mahadomelina mifandraika amin'ny galantamine hydrobromide?
8.Aiza no ahitantsika an'ity vokatra ity?